Iqembu leNgezi Platinum Lokhe Lingakanqotshwa Lonyaka Emidlalweni yePSL
Iqembu leNgezi Platinum Stars lisele kuyilo lodwa iqembu elingakanqotshwa kumidlalo yalonyaka ngemva kokuba litshaye ele Highlanders nge 1 ka nya ngoMgqibelo okuyimpumela elitshiye lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo engamatshumi amabili lambili.
Iqembu le Highlanders lithe ngokudliwa lehla layahlala endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo ikanti endaweni yesibili kuleqembu le FC Platinum lona elilemiklomelo elitshumi lathoba munwe munye kuthi ele Bosso lilemiklomelo elitshumi lesikhombisa.
Ngaphansi kwengalane iqembu leDynamos lize lenelisa ukunqoba okwakuqala kumidlalo yalonyaka lapho litshaya ele Bulawayo City nge 2 ka 1 ngeSonto okuyimpumela eyenze ukuba liphakame kancane engalaneni yemiklomelo liyehlala endaweni yesithathu nxa usuka emsileni.
Iqembu leBulawayo City lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi lilemiklomelo emine okulinani eliphethwe liqembu le ZPC Kariba okuyilo elijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo.
Intathelizindaba yezemidlalo uNash Mkokwayarira uthi kusasemasinya ukuba kucace ukuba kungaphi okuyawela khona induku loxakuxaku ekupheleni kwemidlalo yalonyaka.
“Ungakhangela isimo sengalane kulokhu kugiqwana akukakhanyi ukuthi kuyiwa ngaphi njalo kutshengisela ukuthi akukacaci ukuthi isizini iyathi iphela kuyabe kumi njani.”
Imidlalo yesigaba se Castle Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu le FC Platinum elizadlala khona lele Black Rhinos eMandava, iqembu le CAPS United lizemukela ele Chicken Inn ngase National Sports, iqembu le ZPC Kariba lizadlala lele Ngezi Platinum Stars ngase Nyamhunga kuthi iqembu le Highlanders lizangqikilana lele Mutare City emagumeni eBarbourfields.
NgoLwesithathu iqembu le Yadah lizadlala lele Shabanie Mine eNational Sports, ele Chapungu lizemukela ele Dynamos ngase Ascot, ele Harare City lizadlala lele Triangle ngase Rufaro, iqembu le Bulawayo Chiefs lizadlala lele Herentals eLuveve kuthi ele Bulawayo City lizangqikilana lele Nichrut ngse Barbourfields.
Udaba Lomdlalo Wenguqu Esilethulelwe nguJoseph Njanji